Amanyathelo ama-4 okulawula idatha yovavanyo lwakho
Eyona Qa Amanyathelo ama-4 okulawula idatha yovavanyo lwakho
Wonke umvavanyi ufuna idatha yokuphuhlisa kunye nokuvavanya umgangatho wesoftware kunye nokusetyenziswa.
Idatha yovavanyo inokwenziwa ngesandla, kusetyenziswa isixhobo sokuvelisa idatha okanye inokufunyanwa kwakhona kwimveliso esele ikhona.
Le datha ayenzeki nje; kufuneka ilawulwe ngokufanelekileyo ukuze ibe luncedo kwiimvavanyo. Ulawulo lwedatha yovavanyo lunokwahlulwa lube ngamanyathelo ama-4:
Ingqondo kwimodeli yedatha yakho iyimfuneko ekwenzeni iseti yedatha yovavanyo efanelekileyo. Uninzi lwabavavanyi banokuqonda okuhle kwedatha yabo, kodwa isixhobo sinokukunceda ekufumaneni idatha egcinwe kwindawo yogcino lwedatha.
Idatha yeprofayili yokufumana idatha e-ethe-ethe yabucala, jonga ukuxhomekeka kwedatha kwaye ufumane ukungafani kwedatha ukuphucula iimfuno zedatha yovavanyo
Njengoko bekutshiwo kwi-intro, idatha yovavanyo inokwenziwa ngesandla, ngokuvelisa idatha okanye inokuphinda ifumaneke kwindawo esele ikhona kwimveliso.
Ukwenziwa ngesandla okanye ukuveliswa kwedatha kuyenzeka kuphela xa uneetafile ezimbalwa. Xa inani leetafile likhula, kuya kusiba nzima ngakumbi nangakumbi. Kungenxa yoko le nto imibutho emininzi isebenzisa (100%) ikopi yemveliso, nangona iphelelwe lixesha.
Uninzi lwemibutho ayifuni yonke idatha abayigcinileyo kwindawo engenzi mveliso kwaye ibadla imali. Sebenzisa iseti esezantsi endaweni yoko kuya kubangela iiseti zedatha yovavanyo enazo zonke iimeko zovavanyo ezifunekayo kodwa ayizukuchaphazela amandla okugcina.
Ukufihla idatha yakho
Idatha yovavanyo efunyanwa kwimveliso- isetiweyo okanye hayi- inokuba neenkcukacha zobumfihlo zabucala.
Ukukhusela ulwazi oluchongiweyo lomntu (PII), idatha kufuneka ichazwe okanye ifihlwe ngaphambi kokuba isetyenziselwe iinjongo ezinje ngovavanyo nophuhliso.
Idatha inokugqunywa ngoncedo lwemithetho yokufihla kunye nokuveliswa kwedatha yokwenziwa.
Isixhobo esihle sokugcina idatha sidibanisa iindlela ezininzi zokwakha itemplate efanelekileyo yokumaski.
Ngokuzenzekelayo idatha yovavanyo
Uphando lubonisa ukuba inkalo ebalulekileyo yexesha lophuhliso lwesoftware (kubandakanya ukuvavanywa) ilahlekile kulindwe idatha yovavanyo.
Isizathu soku kukuba isicelo sokuhlaziya siyinkimbinkimbi ngokungeyomfuneko kwaye ngenxa yoko sithatha ixesha, njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongezantsi.
Kutheni ithatha ixesha elininzi kangaka? Kuba ithatha abantu abaninzi! Ukuba i-Dev, uVavanyo kunye ne-QA banokulawula kuphela idatha yabo yovavanyo, ixesha elininzi liya kugcinwa.
Ngoncedo lwesixhobo sokulawulwa kwedatha yovavanyo, abavavanyi banokuhlaziya idatha yabo yokuseta ngezibuko lokuzenzela. Okanye inokudityaniswa nezixhobo zokuzenzekelayo ukubonelelwa kwedatha yovavanyo (kunye nokuseta kunye nokufihla idatha kunokwenziwa ngokuzenzekelayo).
Uvavanyo lweDatha yokuvavanya
Kubalulekile ukuba idatha yovavanyo ifumaneke kakhulu kwaye kulula ukuyivuselela ukuphucula ixesha lokuthengisa isoftware yakho.
Xa idatha yovavanyo ifikeleleka ngokulula kwaye abavavanyi bayakwazi ukuzihlaziya ngokwabo iimeko zovavanyo, umjikelo uphela wesoftware uya kuxhamla.
Kuya kufuneka ulawule idatha yakho yovavanyo ukuba ufuna ukuqala ngokudityaniswa okuqhubekayo okanye ukuhanjiswa okuqhubekayo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nolawulo lwedatha yokuvavanya, ndwendwela https://www.datprof.com .
I-Galaxy Note 20 kunye no-20 uvavanyo lwebhetri ye-Ultra: inyathelo elinye ukuya phambili, amanyathelo amabini ukubuyela umva